Al-shabaab oo ka baxay deegaano ka mid ah Galgaduud – Radio Daljir
Al-shabaab oo ka baxay deegaano ka mid ah Galgaduud
Janaayo 22, 2019 1:41 g 0
Malleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa isaga baxay degaannada Ceel-baxay,Goola-goole iyo Dudun-cad, oo dhanka Koofureed ka xiga Degmada Guri-Ceel ee Gobolka Galgaduud.
Dadka degaannadaasi sheegay in ay arkeen dagalaamayaasha oo halkaasi isaga guuraya, iyagoo u jiheystay dhanka Degmada Ceel-buur.
Dhowaan ayay ahayd markii uu Wasiirka amniga ee maamulka Galmudug, Saadaq Sheekh Yuusuf, sheegay in ay isugu yeereen Saraakiisha Ciidamada, si ay ugu diyaar garoobaan hol-gal ka dhan ah Al-Shabaab si loo xoreeyo degaannada ay Gobolka kaga sugan yihiin.
Waxaa sidoo kale soo dedejisay ka bixista Ururka Al-Shabaab degaannada ka tirsan Galgaduud, markii ay kordheen duqeynta xagga Cirka ah ee lagu bar-timaameedsanaya goobaha ay ku sugan yihiin, iyadoo Laba Cisho ka horna ay duqeyn xooggan ka dhacday Tuulada Dudun-cad oo ka mid ah meelaha ay haatan ka carareen argagixisadu.
Wacaal daray ah: Madaxweynaha Hiirshabeele oo isku shaandhayn Golihii wasiiradda ku sameyeey
Amaamka Garoowe oo la,adkeeyay iyo madaxweyne Farmaajo oo ka soo qayb galaya Caleemo saarka madaxweynaha Puntland